1 Samueri 6:1-21
6 Zvino areka+ yaJehovha yakanga iri munyika yevaFiristiya kwemwedzi minomwe. 2 VaFiristiya vakashevedza vapristi nevashoperi,+ vachiti: “Toitei neareka yaJehovha? Tiudzei kuti tinofanira kuiendesa kunzvimbo yayo pamwe chete nechii.” 3 Ivo vakati: “Kana muchienda neareka yaMwari waIsraeri, musaenda nayo pasina chipo, nokuti munotofanira kumudzorera chinopiwa chemhosva.+ Panguva iyoyo ndipo pamuchaporeswa, uye muchaziva kuti nei ruoko rwake rwanga rusingabvi kwamuri.” 4 Ivo vakati: “Chinopiwa chemhosva chatinofanira kumudzorera chii?” Vakabva vati: “Mamota mashanu endarama nemakonzo mashanu endarama zvakaenzana nokuwanda kwemadzishe akabatana+ evaFiristiya, nokuti mumwe nomumwe wenyu nemadzishe enyu akabatana mune denda rakafanana. 5 Gadzirai mifananidzo yemamota enyu nemifananidzo yemakonzo+ enyu ari kuparadza nyika, mukudze+ Mwari waIsraeri. Zvichida acharerutsa ruoko rwake pamuri uye pana mwari wenyu nepanyika yenyu.+ 6 Uyewo, munoomeserei mwoyo yenyu sokuomesa mwoyo kwakaitwa neIjipiti naFarao?+ Havana kuzovarega vachienda here Iye paakangovaitira zvinorwadza,+ ivo vakaenda?+ 7 Zvino torai zvinhu, mugadzire ngoro itsva+ nemhou mbiri dziri kuyamwisa, dzisati dzasungwa pajoko,+ musunge mhou dzacho pangoro, mudzose mhuru dzadzo kumba kuti dzirege kudzitevera. 8 Mutore areka yaJehovha moiisa mungoro, nezvinhu zvendarama+ zvamuchadzorera kuti zvive chinopiwa chemhosva+ muzviise mubhokisi riri padivi payo. Muirege ichienda, uye iyo ichaenda. 9 Tarirai: kana ikaenda nomugwagwa unoenda kunharaunda yayo, kuBheti-shemeshi,+ iye ndiye akatiitira izvi zvakaipa kwazvo; asi ikasadaro, tichaziva kuti harusi ruoko rwake rwakatitambudza; itsaona+ yakaitika kwatiri.” 10 Zvino varume vacho vakaita saizvozvo. Naizvozvo vakatora mhou mbiri dzakanga dzichiyamwisa, vakadzisunga pangoro, vakavharira mhuru dzadzo kumba. 11 Vakabva vaisa areka yaJehovha mungoro,+ uyewo bhokisi nemakonzo endarama nemifananidzo yemamota avo. 12 Mhou dzacho dzakatanga kuenda dzakananga nomugwagwa mukuru wokuBheti-shemeshi.+ Dzakaenda nomugwagwa mumwe chete, dzichikuma sezvadzaienda, uye hadzina kutsaukira kurudyi kana kuti kuruboshwe. Munguva iyi yose madzishe akabatana+ evaFiristiya akanga achidzitevera kusvikira kumuganhu weBheti-shemeshi. 13 Vanhu vokuBheti-shemeshi vakanga vachicheka gorosi+ mubani. Pavakatarira, vakaona Areka, vakatanga kufara pavakaiona. 14 Ngoro yacho yakasvika mumunda waJoshua muBheti-shemeshi ikaramba yakamira ipapo, pakanga paine dombo guru. Vakatsemura matanda engoro, vakapa Jehovha mhou+ dzacho kuti dzive chinopiwa chinopiswa.+ 15 Zvino vaRevhi+ vakaburutsa areka yaJehovha nebhokisi rayaiva naro, maiva nezvinhu zvendarama, vakaiisa padombo guru. Varume vokuBheti-shemeshi+ vakapa zvinopiwa zvinopiswa, vakaramba vachipa Jehovha zvibayiro zuva iroro. 16 Madzishe mashanu akabatana+ evaFiristiya akazviona, akadzokera kuEkroni pazuva iroro. 17 Zvino aya ndiwo mamota endarama ayo vaFiristiya vakadzorera Jehovha kuti chive chinopiwa chemhosva:+ rimwe chete reAshdhodhi,+ rimwe chete reGaza,+ rimwe chete reAshkeroni,+ rimwe chete reGati,+ rimwe chete reEkroni.+ 18 Makonzo endarama akanga akawanda sokuwanda kwemaguta ose evaFiristiya aiva emadzishe mashanu akabatana, kubvira paguta rakavakirirwa kusvikira kumusha wokumaruwa. Dombo guru ravakagadzika areka yaJehovha chapupu kusvikira nhasi mumunda waJoshua muBheti-shemeshi. 19 Iye akauraya varume vokuBheti-shemeshi,+ nokuti vakanga vatarira areka yaJehovha. Naizvozvo akauraya varume makumi manomwe pavanhu vacho—varume zviuru makumi mashanu—uye vanhu vakatanga kuchema nokuti Jehovha akanga auraya vanhu vazhinji.+ 20 Uyezve, varume vokuBheti-shemeshi vakati: “Ndiani achakwanisa kumira pamberi paJehovha, uyu Mwari mutsvene,+ uye achabva kwatiri achienda kuna ani?”+ 21 Vakazotuma nhume kuvagari vokuKiriyati-jearimu,+ vachiti: “VaFiristiya vadzosa areka yaJehovha. Uyai. Endai nayo kwenyu.”+